कोरोना रोकथाम कोषलाई प्राईम बैंकको १ करोड ७५ लाख सहयोग
काठमाडौं । प्राइम कमर्शियल बैंकले सरकारको ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’मा रू. १ करोड ७५ लाख सहयोग प्रदान गरेको छ । बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्रदास श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरागाईंलाई शुक्रवार उक्त रकम हस्तान्तरण गरे । यसका
नेपाल बैंकको ब्रान्ड एम्बेस्डरमा पुन नियुक्त
फागुन २०, काठमाडौं । मुलुकको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडको ‘ब्राण्ड एम्बेस्डर’मा युवा वैज्ञानिक डा महावीर पुन नियुक्त भएका छन् । पुन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र नेपालका अध्यक्ष पनि छन् । नवीन सोच भएका युवालाई उद्यमी बन्न र मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान दिन लागिपरेका पुनसँग ब्राण्ड एम्बेस्डर
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरी सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । सोमबार रिपोटर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष पदरमराज रेग्मीले हालै नेपाल राष्ट्र
काठमाडौं । एनएमबी ब्यांकले घर कर्जा सुविधा अन्तर्गत नयाँ एनएमबी बलूनिङ्ग एण्ड रिभर्स बलूनिङ्ग योजना शुरु गरेको छ । घर कर्जा सुविधा लिन चाहने ग्राहकहरुले यस नयाँ योजना अन्तर्गत अब आफ्नो आवश्यकता अनुसार सम–मासिक किस्ता (इएमआई) बुझाउने विधि चयन गर्न सक्नेछन् । बलूनिङ्ग सुविधाले घर कर्जा लिने ग्राहकलाई
विमर्श सहकारी दशौं वर्षमा प्रवेश
काठमाडौं । विमर्श वचत तथा ऋण सहकारी संस्था दशौंं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । शनिबार संस्थाको वार्षिक साधारणसभामा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.शंकरप्रसाद शर्माले ‘टेक अफ पोइन्ट’मा सहकारी अगाडि बढेको बताए । शेयर लगानी कर्ताको वचतको सुरक्षा, चुस्त व्यवस्थापन र नयाँ प्रविधि पछ्याउदै गए विमर्शले
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से १६.०५ बिन्दु अर्थात् १.३९ प्रतिशतले घटेर एक हजार १३९.२५ बिन्दुमा पुगेको छ । यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक २.४९ बिन्दु अर्थात् करीब एक प्रतिशतले घटेर २४९.७१ मा पुगेको छ । नेप्से
टि एशोशिएसनमा नयाँ नेतृत्व चयन,अध्यक्षमा मैनाली र महासचिवमा पौडेल
काठमाडौं । नेपाल टि एशोशिएसनले कमल मैनालीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । एशोशिएसनको बिहीबार काठमाडौंमा सम्पन्न प्रथम साधारणसभाले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । साधारणसभाले संघको तीन उपाध्यक्षम क्रमशःगणेश राई,निरज राठी र प्रमिता ब्रजाचार्य र महासचिवमा केदारमणि पौडेल निर्वाचित
भुक्तानी सेवा प्रवाह गर्न पे टाईमले पायो अनुमति
काठमाडौं । नेपाल पे टाईम प्रालिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालभर भुक्तानी सेवा प्रवाह गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ । बैंकले शुक्रबार अनुमति प्रदान गरेको कम्पनीका अध्यक्ष भक्तराज भट्टराईले जानकारी दिए । उनले भने,‘अब छिट्टै विशेष तयारीसाथ स्तरीय सेवासहित बजारमा जाने रणनीति कम्पनीको छ ।’ २०७४ माघमा
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकको नयाँ शाखा काठमाडौंको शंखमुलमा स्थापना गरिएको छ । शाखाको बिहीबारका औपचारिक उद्घाटन गरियो । शाखाको नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गर्नुभयो । कार्यक्रममा बैंकको सञ्चालक समितिका
स्वयम्भुनाथ परिसरमा क्लासिक टेकको रक्तदान कार्यक्रम
काठमाडौं । क्लास्सिक टेक प्रालिले १० औं वार्षिकोत्वसवको उपलक्ष्यमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कोर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्वयम्भुनाथ परिसरमा सम्पन्न रक्तदानमा ८० भन्दा वढी सहभागी भएका थिए । नेपालमा २३ ओटा शाखा रहेको यस कम्पनीले मुलुकका अन्य क्षेत्रमा पनि सामाजिक कार्य गर्दै
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकलेका नयाँ शाखा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ६ स्थित तीनचुलीमा स्थापना गरिएको छ । शाखाको सोमबार नाम्ग्याल ज्याङ्छुन् छ्योलिङ गुम्बाका रिनपोछे लोसाङनाम्गेल रिनपाछेले गर्नुभयो । कार्यक्रममा बैँकका प्रमुखकार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेले बैँकले सेवाग्राहीका
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकको नयाँ शाखा धरानमा स्थापना भएको छ । सुनसरीको धरान उप–महानगरपालिका–९, पुतलीलाइनमा स्थापित शाखाले सोमबारबाट कारोबार थालेको हो । सो शाखा सञ्चालनमा आएसँगै बैंकका शाखाको संख्या ९९ पुगेको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कूल ५ अर्ब ३२ करोड नाफा आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नाफा ४६ प्रतिशतले बढेको बैंकले जानकारी दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा बैंकको कूल नाफा ३ अर्ब ६५ करोड रहेकोमा गत आवमा ५ अर्ब ३२ करोड नाफा कमाउन सफल भएको बैंकले जनाएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य
महालक्ष्मी विकास बैंकको ९८ औं शाखा ठमेलमा
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकको ९८ औं शाखा काठमाडौंको ठमेलमा खुलेको छ । शाखाको सोमबार उद्घाटन गरियो । बैंकले ग्राहकको विश्वसनीयतामा अभिवृद्धि गरि देशव्यापी शाखा विस्तार गर्ने र सबै क्षेत्र एवम् वर्गमा बैकिङ सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले शाखा बिस्तार गर्दै आएको जनाएको छ । बैंकले योसहित
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरमा जान बाणिज्य बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गरेको छ । बुधबार २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जाने बैंकलाई विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ । गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै २०७७ असार मसान्तसम्ममा एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति
विकास बैंकतर्फ उत्कृष्ट बीपीए अवार्ड महालक्ष्मीलाई
काठमाडौं । नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) ले प्रदान गर्ने बेष्ट प्रिजेन्टेड एनुअल रिपोर्ट (बीपीए) अवार्डबाट विकास बैँकतर्फ महालक्ष्मी विकास बैंक प्रथम भएको छ । बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा.श्री युवराज खतिवडाले बैँकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेलाई
महालक्ष्मी बैंकको पृथ्वीचन्द्र अस्पताललाई सहयोग
काठमाडौ । महालक्ष्मी विकास बैंकको परासी शाखाले पृथ्वीचन्द्र अस्पताल रामग्राम नवलपरासीमा तातोचिसो पानी उपलब्ध हुने विभिन्न सामग्री प्रदान गरेको छ । बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत अस्पतालमा तातो चिसो पानी आउने वाटर डिस्पेन्सर,वाटर प्युरिफायर तथा वाटर मोटर मेसिन निःशुल्क जडान गरेको हो । बैंकले
एक महिनामै फेरिए सनराइजका सिईओ
काठमाडौं । सनराइज बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा जनक शर्मा पौड्याललाई नियुक्त भएका छन् । ३० बर्षे बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएका पौड्यालले नबिल बैंकबाट करियर सुरु गरेका हुन्। उनले सन् १९८७ मा इन्ट्री लेभलबाट करियर सुरु गरेका थिए। नबिलमा ११ बर्ष काम गरेपछि उनी एनआइसी बैंक अहिलेको (एनआइसी एसिया) गएका थिए।
महालक्ष्मीको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक सुकेधारा शाखाले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरेको छ । ओम अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टरसँगको सहकार्यमा शनिबार सञ्चालित स्वास्थ्य शिविरमा मधुमेह, स्त्री तथा प्रसुति रोग र रक्तचापको विशेष जाँच गरिएको थियो । सो अवसरमा तीन सय भन्दा वढीले स्वस्थ्य जाँच गराएका थिए । बैंकको
महालक्ष्मीका सेवाग्राहीलाई ह्याम्समा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले सेवाग्राहीहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ह्याम्स हस्पिटलसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौता बमोजिम बैंकका सेवाग्राही, कर्मचारी, कर्मचारीका परिवारले ह्याम्समा स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार गराउँदा सेवाशुल्कमा १० प्रतिशतसम्मको छूट पाउने छन्
क्यान्सर र मृगौला पीडितलाई महालक्ष्मीको सहयोग
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले स्तन क्यान्सर पीडित गायत्री पौडेललाई १५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गराउँदै आएकी काठमाडौँ बसुन्धारा निवासी पौडेलको आर्थिक स्थिति निकै कमजोर थियो । यसै अवसरमा बैंकले सुखटिया– ५, कालीकोट निवासी वसन्ती कुमारी शाहीलाई पनि सहयोग
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडको नयाँ शाखा काठमाडौंको टंगालस्थित भाटभटेनीमा स्थापना गरिएको छ । देशभर बैकिङ्ग सेवा तथा पहुँच विस्तारमा रहेको बैंकले बिहीबार ९६ औं शाखा काठमाडौँ महानगरपालिका– ४ टंगालस्थित भाटभटेनीमा स्थापना गरेको हो । बैंकले शाखा स्थापना गरिएका क्षेत्रहरुमा ग्राहकहितलाई
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकको नयाँ शाखा नवलपुरजिल्लाको कावासोती नगरपालिका– ८, मा स्थापना भएको छ । शाखाको उद्घाटन बिहीबार कावासोती नगरपालिकाकी मेयर चन्द्रकुमारी पुनले गरिन् । कार्यक्रममा बैँकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेश लम्सालले देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन बैंक अपरिहार्य भएको
कुल पोष्ट : 171